पदाधिकारीविहीन बन्यो संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान, घाम तापेर दिन काट्दै कर्मचारी
काठमाडौं– नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान अहिले पदाधिकारीविहीन बनेको छ ।
गत भदौदेखि प्रज्ञा प्रतिष्ठान पदाधिकारी बिहीन भएको हो । सरकारले पदाधिकारी नियुक्ति नगर्दा अहिले प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरु घाम तापेर दिन विताइरहेका छन् ।
यसअघिका पदाधिकारीको चार वर्षे कार्यकाल भदौं १९ गते सकिएको थियो ।
नयाँ पदाधिकारी सरकारले नियुक्त नगर्दा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान नेतृत्व विहीन भएको हो ।
दैनिक कामहरु हुन सकिरहेका छैनन् भने भएका कर्मचारीहरु घाम तापेर दिन कटाउन बाध्य छन् ।
स्रष्टाहरुको सम्मान, प्रोत्साहन तथा सम्बद्र्धनमा काम गर्दै आएको प्रतिष्ठान पदाधिकारी बिहीन बन्नु गम्भिर विषय भएको बताउँछिन् प्रतिष्ठानकी पूर्व परिषद सदस्य एवं अभिनेत्री मिथिला शर्मा । भन्छिन्, ‘यति धेरै समयसम्म अलमलिनु राष्ट्रसँग कुनै पनि भिजन नभएजस्तो देखियो ।’
उनी पदाधिकारी परिपूर्ति हुन नसक्दा यस अघिका प्राज्ञहरुले शुरु गरेको काम पनि रोकिएको बताउँछिन् ।
‘हाम्रो क्षेत्रलाई हुनुपर्ने योगदान, संरक्षण नै हुँदैन नि ! ʼउनले लोकान्तरसँग भनिन् ‘सरकारले छिटोभन्दा छिटो पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्छ ।’
पूर्व कार्यवाहक सदस्यसचिव रमेशरञ्जन झा पनि लामो समयसम्म प्रतिष्ठान पदाधिकारी बिहीन बन्नु सरकारको ठूलो कमजोरी भएको बताउँछन् । ‘पदाधिकारी नभएपछि तलब खुवाउने भन्दा अरु काम भएको छैन्’ झाले लोकान्तरसँग भने ।
यति लामो समयसम्म पदाधिकारी बिहीन भएको प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी चयन गर्न सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदमचाल्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
पुस ४, २०७५ मा प्रकाशित
युट्युब ट्रेन्डिङ : एक नम्बरमा 'नेला टिकट,' शीर्ष ५ मा कुन-कुन अटाए ?
सोनाको 'किन हो बिर्सनी' सार्वजनिक [भिडियोसहित]